Ra’iisl Wasaaraha oo ku sii jeeda Kismaayo – Radio Muqdisho
Ra’iisl Wasaaraha oo ku sii jeeda Kismaayo
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiil ka tirsan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa Radio Muqdisho u sheegay in maanta uu wasiirka koowaad gaari doono Kismaayo oo uu kula kulmi doono masuuliyiinta maamulka Jubba iyo qeybaha bulshada.
Wariye Aadan Kismaayo oo Radio Muqdisho ka tirsan ayaa ku soo warramaya in magaalada Kismaayo ay ka socoto qabanqaabada soo dhaweynta Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa.
Dhawaan ayay xukuumaddu ka codsatay baarlamaanka in uu hakiyo mooshin ka dhan ah baarlamaanka maamulka Jubba oo dhawaan la soo dhisay. Ayadoo xukuumaddu ay ballan qaadday inay guddi u dirayso Kismaayo si loo xalliyo cabashooyinka ay beelaha qaar ka muujiyeen dhismaha baarlamaanka Jubba.
Wixii warar ah ee ku soo kordha safarka Ra’iisul Wasaaraha waan idinka soo socodsiin doonnaa.
Deeq la gaarsiiyay dadkii soo cararay Yemen ee ku sugan Muqdisho